Hevitra MPANOHARIANA | Febroary 2008 | 2
2008-02-01 @ 07:45 in Andavanandro
Rehefa ny fikambanana no miditra amin'ny fakana an-keriny olona atao takalon'aina dia tsy eken'ny mpanaja ny demokrasia ho ara-dalàna ny zavatra ataon'ilay fikambanana. Na ho inona na ho inona hamafin'ny zavatra mihatra tsy fanao izany afa-tsy hoe miditra amin'ny lojikan'ny ady ka raha maka takalon'aina aho dia mety tsy ho voasambotra aloha ho fitsimbinana ny ain'ilay takalon'aina fa raha votsotra kosa iny dia hifampitana amin'izay ny mpanao fanjakana sy ny mpanao takalon'aina. Izany hoe ny fakana takalon'aina dia efa fihantsiana ady sy fiokoana tanteraka. Amin'ny lafiny iray ihany koa dia efa ny fikambanan-jiolahy te-hifampitana amin'ny fanjakana sy/na miaro ny tenany tsy ho voasambotra no miditra amin'izany fakana an-keriny izany.
Ataoko fa efa maro amin'ny mpamaky ny nandalo na nianatra tamin'ny Oniversiten'i Madagasikara amin'ny ankapobeny. Efa maro no nahita ny fitokonana saiky fanao isan-taona tamin'ireny toerana ireny. Efa nisy ny nanao fanakanan-dalam-be na lalam-pirenena ihany koa ho fanehoam-pitakiana. Tsy mbola miresaka ny zavatra takiana mihitsy aho eto aloha.Mbola azo leferina ihany ny zavatra toy izany satria tsy manohintohina mivantana ny ain'olona hafa fa tena laviko sy melohiko tanteraka kosa ny fanaovana izany fakana olona an-keriny hatao takalon'aina izany na inona na inona antony. Hitantsika amin'ny gazety androany fa nanao takalon'aina tompon'andraikitra tao amin'ny Oniversite tao hoe ny mpianatra ... ary dia izay ihany koa dia nanaiky hifampiraharaha ny tompon'andraikitra hafa ... ho fitsimbinana ny aina angamba! nefa dia misy tsoa-kevitra mazava be mivoaka amin'izany dia hoe rehefa mitaky zavatra ianareo rankizy dia ataovy takalon'aina i rano na sy i ranona fa hivaha ho azy io olana io. Andeha atao hoe milamina aloha izany ny resaka tranon'ny mpianatra noho ny fanafahana ilay na ireo takalon'aina. Fa moa tsy hiverina vetivety indray io olana io afaka kelikely fotsiny? Dia tsy ho ela angamba dia ho be ny hihevitra fa noho ny fianarana naka takalon'aina tany amin'ny Oniversite no nahazatra ny sasany ho mpanao takalon'aina rehefa tsy mpianatra intsony.
Mampihomehy mahatsiravina ihany ny toe-draharaha. Ny fototry ny olana manko dia ny fahazoana taratasy nataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Oniversite hialana amin'ny trano onenan'ny mpianatra. Taitra ny fikambanan'ny mpianatra ka nihetsika tamin'ny alalan'ny fikambanana isam-paritra. Dia lasa ny eritreritro manao hoe tena resaka trano ihany ve no fototry ny olana? marina fa sarotra ny mitady trano fa izaho koa mba mahita tsy rariny amin'io fizarana trano io raha mbola azo lazaina hoe fizarana trano no filaza azy.
Voalohany amin'izany tsy rariny izany ny tsy fahazoan'ny mpianatra avy amin'ny fari-piadidian'Antananarivo zo hahazo trano eny amin'ny Oniversite 'satria akaiky izy ireo'. Eritrereto ny mpianatra avy any Antsirabe, Tsiroanomandidy ary Anjozorobe fa any amin'ny an-jatony kilaometatra no misy azy ireny nefa tsy mety hahazo trano onenana, raha tsy diso aho dia efa roapolo taona mahery no nisian'izay trangan-javatra mbola mitohy mandraka ankehitriny izany. Samy mpianatra ihany ary samy malagasy ihany amin'izay fotoana izay. Efa karazana fanavakavahana mivandravandra mbola tsy nisy nanambara amphibemaso aloha iny.
Faharoa manaraka izany, ary ataoko fa ity no tena nahatonga ny fakana takalon'aina. Efa bizina ahazoam-bola be ny 'mivarotra' ny trano eo amin'ny samy mpianatra. Tsy misy manaiky hiala maina izany ireo mpianatra ankehitriny ireo raha toa ka efa 'novidiany' an'hetsiny eny efa mahatratra an'arivoarivony ariary any ho any vao nahazo io trano io. Ahoana moa izany? Ny mpianatra efa hiala ny toerana no 'mivarotra' izany hoe tsy azy ny trano fa an'ny Oniversite saingy raha misy mpianatra vaovao mitady tranon'ny mpianatra ipetrahana dia 'mividy' amin'io mpianatra hiala io. Izany hoe tsy lasanao akory ny trano fa soratana amin'ny anaranao na anaran'olon-kafa mbola mpianatra ihany koa saingy ianao no mipetraka 'tsy misy manelingelina ao'. Efa lasa fomba fanaon'ny mpianatra io tranga io fa tsy fantatro hoe efa ren'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Oniversite ve? Izany hoe misy raharaham-bola mandehandeha ao ambadik'izao fanadiovana izao. Ny tena mahavariana dia misy izany toerana hita fa tokony ho kaboney tany aloha tany fa mahatratra telo na efatra hetsy ny 'vidiny' nefa ny velaran'ny toerana dia 4 metatra toradroa eo ho eo.